सत्य-स्वरुपको बहु प्रतिक्षित ‘मैसाब’ सार्वजनिक - लण्डन काठमाडौँ
मनोरन्जनNovember 26, 2020
सत्य-स्वरुपको बहु प्रतिक्षित ‘मैसाब’ सार्वजनिक
काठमाडौं, ११ मंसिर । कवाली शैलीको रोमान्टिक गीत म्युजिक भिडियोसहित सार्वजनिक गरिएको छ । गायक तथा संगीतकार दाजुभाई सत्यराज र स्वरुपराज आचार्यको स्वर तथा संगीतमा ‘मैसाब’ बोलको कवाली फ्लेवरको गीत सार्वजनिक गरिएको हो ।
राजखानदानमा प्रयोग हुने उच्च आदरार्थी शब्द रहेको गीत सुन्दा जति आनन्द आउँछ, त्यति नै मज्जा आकर्षक म्युजिक भिडियो बनेको छ । लोकप्रिय कोरियोग्राफर कविराज गहतराजको निर्देशनमा तयार भएको म्युजिक भिडियो दरबारिया शैलीमा निर्माण गरिएको छ । बिहेका लागि राजकुमारीलाई हेर्न पुगेका दुई राजकुमारको प्रवेशपछि दरारमा चलेको कवाली प्रस्तुत गरिएको भिडियोमा पल शाह दोहोरो भूमिकामा छन् । पलले राजकुमार दाजुभाईको भूमिकामा अभिनय र नृत्य गरेका छन् ।
त्यस्तै, राजकुमारीको भूमिकामा सिक्कीमेली सुन्दरी छुकिला शेर्पालाई प्रस्तुत गरिएको छ । केही म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसकेकी छुकिला नेपाली रजतपटको ढोका ढकढक्याउने क्रममा यो गीतको म्युजिक भिडियोमा देखिएकी हुन् ।
भिडियोमा कविराज गहतराजले होटल याक एण्ड यतिलाई आलिसान दरबारको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् भने आउटडोर इनडोरमा सयभन्दा बढी कोरस कलाकारलाई लोभलाग्दो ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।
भिडियोमा गायक दाजुभाई सत्यराज र स्वरुपराज आचार्यसमेत कवाली गाउँदै गरेका देखिन्छन् । कोरियोग्राफीको कलामार्फत हरेकजसो फिल्मी गीतलाई धनी बनाउँदै आएका कविराज गहतराजको यो भिडियो पनि कुनै फिल्मी गीतभन्दा कम लाग्दैन । गीतमा शब्द रचना अमृत खतिवडा (भाञ्जाभाई) तथा सत्यराज र स्वरुपराज आचार्य एवं संगीत संयोजन उदयराज पौडेलको रहेको छ । कैलाश राई (सिक्कीम)द्वारा निर्मित भिडियोमा कोरियोग्राफी दीपकराज सुनार, सम्पादन अर्जुन जिसी, भिएफएक्स सत्यम राना, कलर रेनिष फागोको रहेको छ ।
लोकप्रिय गायक सत्यराजको ‘नजरको नशा’…
विश्व र अस्मिताको ‘आकशै को…
इतिहास रच्दै नेपाल आइडल-३ की…
रहेनन् ऋषि कपूर
कोरना सचेतना कार्टुन
प्रख्यात मोडल आचल शर्माले पाइन…
चाहिनेजो गीतले सारालाइ ततायो।
विश्व ब्याडमिन्टन वरीयतामा नेपालका प्रिन्सले…
काठमाडौंमा उपमेयरको दौड: रामेश्वर पन्छाउँदै डंगोलले गर्लिन् गोल ?
लस्कर फूडसको कर्पोरेट लन्च प्याकेज, गरिमा विकास बैंकको शाखा शाखामा
बजेटबाटै चालु खर्च कटौतीको तयारी, मन्त्रालयहरू असन्तुष्ट
‘अवतार २’को ट्रेलर : पान्डोरा ग्रहमा आदिवासी र पृथ्वीबाट गएका मान्छेको संघर्ष
प्रकाशमान सिंहको चेतावनी : टिमले हारेर आफूले मात्रै जित्ने सपना नदेखे हुन्छ
चुनाव र राजनीतिक प्रणालीमा १५ प्रश्न
प्रधानसेनापतिका भाइ नागार्जुनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवार
६ महिनाअघि मात्रै सन्जुले प्रहरी सेवाबाट राजीनामा दिएकी थिइन्
कर्ण मल्लको दाबी- ५६३९ नम्बरको गाडीमा करोडौं रुपैयाँ ल्याइएको छ, देउवाले बाँड्दैछन् (भिडिओ)
नेपाल निर्वाचन: चुनावको तयारी कति सकियो, नयाँ मतदाताले कहाँ र कहिले पाउँछन् परिचयपत्र?
नेपाल निर्वाचन: काठमाण्डू महानगरमा ठूला दललाई स्वतन्त्रको चुनौती
युक्रेन युद्ध: फ्रान्सका राष्ट्रपतिका अनुसार ईयूमा सामेल हुन किएभलाई 'दशकौँ लाग्ने'